पार्टी एकिकरणको ऐतिहासिक क्षणमा किन उपस्थित भएनन् झलनाथ खनाल ?::सुनौलो न्यूज
पार्टी एकिकरणको ऐतिहासिक क्षणमा किन उपस्थित भएनन् झलनाथ खनाल ?
जेठ ३ काठमाडौं, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता घोषणाको ऐतिहासिक सभा राष्ट्रिय सभागृहमा चल्दै गर्दा एमालेका बरिस्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल कतै देखापरेनन दुवै पार्टीको संयुक्त बैठक र पार्टी एकीकरण घोषणासभामा खनालको खोजी भयो । पार्टीलाई उनी कता छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी नै थिएन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल निकट स्रोतका अनुसार उनी निजी कामका सिलसिलामा चीनमा छन् । खनाल व्यापारिक कामका सिलसिलामा चीन र मलेसियातर्फ बेला बेलामा जाने गर्छन् । उनका छोरा निर्भिक चित्रकार चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर व्यापार व्यवसायमा छन् ।